Found lesizalo prolapse. Okufanele ukwenze ngayo futhi sibaphathe ngayo?
impilo yabesifazane ulula kakhulu, futhi iyiphi ngeziphambeko kusukela kuyinsakavukela usathola nemiphumela ebuhlungu. Izinkinga, okuvame basizwa ukuba wathola le prolapse lesizalo. Okufanele ukwenze ezimweni ezinjena, hhayi wonke amantombazane bazi. Izimpawu zesifo eziningi, kodwa akuzona zonke ukusheshe abone udokotela.
Lapho enkingeni enjalo ngokuhudula ubuhlungu esiswini ephansi kanye ephansi emuva, ukuqunjelwa, futhi incontinence urinary. Uma inqubo is run, kungase udedele kakhulu kwesibeletho kusukela perineum. Lokhu kungenxa imisipha buthaka, lapho nabanye umzamo futhi ukucindezeleka, isitho sangasese somuntu wesifazane odongeni ukuwa.
Kunezizathu eziningi, lokhu kuhlanganisa umsebenzi onzima, izinguquko azalwa naso, ezinqala isisindo ushintsho (phansi), izinguquko ezihlobene nokukhula. Kwabanye, ukuthola ukulethwa push, lapho kuzalwa umntwana kusukela isikhundla okungalungile. Akuwona wonke umuntu uyakwazi ukuze uthumele izinyembezi ezinhle isizalo. Kusukela hormone abesifazane aluqinile kanye kushintsha njalo, kungase kuthinte ukuthuthukiswa lesi sifo. Yiqiniso, into kunalokho ezingemnandi kwaba ukungafakwa kwesibeletho, yini okufanele uyenze esimweni esinjalo?
Okokuqala, kubalulekile ukuba sengethukile futhi soberly zibonisa. Zimbili izinhlobo lesizalo prolapse, inani kanye ngokwengxenye. ahlupheke futhi etholakala eduze izitho lapho uwubona okokuqala. Ngenxa enamandla prolapse esinyeni izibilini ingasebenza modified. Nge zamagciwane abukhali futhi esinamandla bangase ukuthuthukisa cystitis, izinkinga wamathumbu ukunyakaza. Esimweni esinjalo kungase kuphakame izilonda, ukopha nokuvuvukala. Ngakho-ke, nje kudingeka ukuqapha njalo ngudokotela.
ukwelashwa okulondoloza kuyafaneleka kakhulu, njengoba kwembulwe lesizalo prolapse. Okufanele ukwenze nge izinkinga ezinjalo? Ukuze uqale nge ebekiwe Physiotherapy, massage okhalo. ukunakekelwa okukhethekile ikhokhelwa amakhambi okwelapha, ezinye izimali kahle kakhulu ukuqinisa imisipha okhalo. Ngenxa yalesi eziyinkimbinkimbi kungabonakala nasemkhakheni Dynamics omuhle ezigulini. Nge ukuphambuka encane noma ubudala kamuva sangena pessary esithweni sakho sangasese. Ivame ukubizwa a pessary, it is zigxilé wesibeletho, ngaleyo ndlela abacindezela umzimba kwesibeletho endaweni. Le ndlela kuyafaneleka noma ubani akuyona ukuphila ubulili okumatasa, ngabo kuyoba godsend. Ngo pessary, kukhona downsides - idinga egeza. Futhi hlela iringi kufanele udokotela, ngemva kwalokho-ke lehla futhi udinga ukubeka ke esikhundleni ukhululekile.
Of amathawula ungenza indandatho futhi uzigqoka esiswini, ukulungisa suspenders. ngebhandeshi okunjalo ukunciphisa kabi esiswini ephansi. Kuzo zonke izinqubo, futhi ngemva kokuma bazivikele ezisindayo. Ukudla Kunconywa ukungena ulamula. Ukuze kwenziwe ngcono ukuphakelwa igazi ukuze sangasese wenziwa ukwelashwa kwama-hormone. Iziguli ebekiwe replacement therapy ne-estrogen.
Khomba bese swe kahle emitholampilo ucwaningo usizo. Ladies ngokuvamile bayesaba ukuzwa lesizalo prolapse, yini okufanele uyenze esimweni esinjalo? Ngo isimo esizolile ukutshela nesineke ngalesi sifo, ukuchaza indlela yokukwenza ultrasound kwesibeletho. Abanye, akusiyo uyazi le nqubo futhi uzizwe yokwesaba.
I -ultrasound kwesibeletho akukho esabekayo futhi kabuhlungu. Ucwaningo olufana nalolu ezimbili zama: inhlolovo eyenziwa ngokusebenzisa besisu udonga (ebusweni) noma ngokusebenzisa sangasese. Kuzo zombili lezi zimo, inzwa isetshenziswa, bayehluka kuphela isayizi shape. Kuye avelelwe owandulela ukuqulwa kwecala, udokotela self-ukhethe indlela oyifunayo. uhlobo kwesitho sangasese of ultrasound kungenzeka ngokuningiliziwe futhi kabanzi ukuze uhlole kwesibeletho futhi ezikhiqiza amaqanda.
By endleleni, uma ukhathazekile futhi awazi lapho kungcono ukwenza i-ultrasound kwesibeletho, cela udokotela wakho. Kusukela esinqumweni sango-ezimele okwenza kulesi simo kungaba engadingekile.
Cytology Pap ebonisa ukuthi? kulungiswa imiphumela
Ukudansela isiginci sakhe esiswini, nakuqala kokuya esikhathini - yini okumele uyenze
Ureaplasma kwabesifazane: nemiphumela, izimpawu, ukwelashwa. Ureaplasma kwabesifazane: izinga
Ukungabi nge-ovulation phakathi nowe kokuya esikhathini: izimbangela, ukwelashwa. Impilo ezalayo Centre
Izici Female: izizathu eziningana izingono kungani silume
Ingane Podkashlivaet. Isimilo kukhwehlela nezindlela zokwelashwa
Candidiasis kwabesifazane: Izimpawu, Ihlahlubo, zokwelapha
I-Euphorbium compositum: ukubuyekezwa nezincomo
Indlela ukunciphisa umzimba fast: akukho kwengqondo magic amaphilisi
IKEA embhedeni - ukukhetha enye
Ukuhlinzwa umgogodla futhi isikhathi nokuvuselelwa
Goji amajikijolo njengendlela phisa? Indlela yenza Goji amajikijolo
Tincture we-alcohol. ukupheka zokupheka
Umbala jeans: kanjani ukubuyisela ukubukeka yokuqala
Ukunisela orchid ekhaya: into esemqoka - Ungeqisi it